Buntesnachrichtendienst Archive - Kodzero dzevanhu & Chiedza Art na ∴ PixelHELPER Foundation
Ruvara rwehungwaru rwebasa
Isu ndisu Buntesnachrichtendienst - yekutora chikamu chegutsaruzhinji
Iyo Buntesnachrichtendienst inotsigira vanoita zvekuratidzira uye huswa danho riri kushanda kune shanduko huru yemaitiro muEurope. Nyanzvi uye vezvinabhizinesi vanobva kupasi rose vanotsigira hunyanzvi hwekuchenjera basa kune vakasununguka vamakororo kubva mumajeri, kubatsira varungu uye kuburitsa huori pasi rose. Isu tinozvibata-bata uye vavengi vedu vanofanirwa kutitora zvakanyanya. Isu tinovimba nerusununguko rwehunyanzvi uye rusununguko rwekutaura.
United Stasi yekuAmerica akamira pamadziro emumiriri weAmerica muBerlin nevamwe vamiriri veAmerica kuGermany, kusanganisira Düsseldorf, Frankfurt uye Hamburg. Icho chikonzero cheichi kusanyara kwekutsveta paNSA uye sevhisi yeAmerican service.
Isu ndisu Buntesnachrichtendienst - yekutora chikamu chegutsaruzhinji June 15th, 2020Oliver Bienkowski